Dalalka Afrika oo saxiixay heshiiskii ugu ballarnaa ganacsi xor ah WTO ka dib – Kasmo Newspaper
Updated - March 22, 2018 11:51 pm GMT
London (Kasmo), Riyadii ahayd suuq qur ah oo Afrika yeelato ayaa soo dhaboobaysa ka dib markii 44 hoggaamiye oo Afrikaan ah oggolaadeen heshiis ku saabsan ganacsi xor ah oo noqonaya midkii ugu ballaarnaa tan iyo curashadii WTO, Ururka Ganacsiga Adduunka.
Ha yeeshee dalalka Afrika waa 55 oo cidda ka soo horjeedda heshiiskan tahay Nigeria, dalka ugu dhaqaalaha buuran qaaradda, kaas oo ka baqaya suuqa xorta ah in uu ku keeno cawaaqib dhanka bulshada ah.
Saxiixyada heshiika waxaa maalintii Arbacada, 21kii March, lagu duugay intii uu socday kulan gaar ah oo Midowga Afrika uga socday Kigali, Ruwanda, laguna soo gabagabeeyay geedisocod 3 sano socday oo horey loogu qaaday tillaabo muhiim ah, sidii looga dhabayn lahaa go’aan AU ku gaaray shir dhacay 2012kii.
Bishii Jenaayo ee sannadkaan waxaa Addis Ababa lagu go’aansaday abuuritaanka CFTA (Continental Free Trade Area) oo ah aag xor ah oo ganacsiga 1,2 Bilyan oo qofood. Min Qahira ilaa Cape Town, Tunisi ilaa Jabuuti oo wax soo saarka Gudaha GDP ka badanyahay $ 3,4 Trillion oo Dollar (Qiyaasaha qaarna 2,6 Trillion).
Heshiiska oo hadda dalalka Afrika tahay in ay ansixiyaan waxaa loola jeedaa sidii loo kordhin lahaa is-weydaarsiyada ganacsiga Afrika oo xilligaan ay matalayaan 16% qur ah marka loo eego kuwa Asia 51% iyo Yurub 70%.
Ujeeddadu waa in heshiiska la dhaqangaliyo dhammaadka sannadkaan, iyada oo sidaas lagu dardargalinayo xitaa abuuritaanka midow dhanka Kastamka ah.
BBC-da ayaa xusaysa in suuqa qur ah ee Yurub uu qaatay korriimo socotay nus qarni, loona baahnaan doono in la eego sida dhab ahan uu u hirgali doono geedisocodka lagu baabi’inayo jidgooyada dhanka ascaarta.
Waxaa kale oo jirta diidmada Nigeria oo leh wax soo saarka ugu sareeya Afrika, sida ay qorayso xogta World Bank ee 2016kii. Madaxweyne Muhamadu Buhari oo u nuglaaday cadaadiska, gaar ahaan xiriirrada Shaqalaha, ayaa ka baaqday shirkii lagu saxiixay heshiiska.
Laakiin qaar ka mid ah kuwa dhaqaalaha buuran ama xawaaraha ku socda leh, sida Itoobiya iyo Ghana ayaa saxiixay heshiiska oo u faa’ideynaya dalalka dhaqaalaha buuran leh, isaga oo shaqooyin u abuuri doona iyo xitaa xiisado muhaajiriin shaqo doon ah la xiriira.